အိ – Hlataw.com
အမအိရေ အမအိ..အိမ်မှာ ဘသူမှမရှိဘူးထင်တယ် ကျွန်တော့်ကအဲ့လိုပဲ ဝင်ထွက်သွားလာ နေကျပါ ကျွန်တော်ဝယ်လာတဲ့ ခွေတေ အစ်မငှါးသွားတယ် ဆိုတာနဲ့ လာတောင်းတာ အိမ်ရောက်တော့ ဘသူမှမရှိ ထူးသံမကြားရ အဲ့တာနဲ့ပဲ အိမ်ပေါ်တက်သွားတော့ အိပ်ခန်းထဲ အသံကြားတာနဲ့ အခန်းတံခါးက စေ့ရုံစေ့ ထားပါတယ် အဲ့တာနဲ့ပဲ အခန်းထဲ ဝင်သွားတော့ တွေ့လိုက်ရတာက အစ်မက ရေချိုးမလို့ အင်္ကျီလဲနေတာပါ အပေါ်က Tshirtလေးကို အရင်ချွတ် လိုက်ပါတယ် ပီးတော့အောက်က အိမ်နေရင်း ဘောင်းဘီလေးကို ချွတ်တယ်ဗျအမယ် ဒီလိုဆိုတော့လည်း ငါ့အမကလှသားပဲ အစ်မကအရပ်က သိပ်တော့မရှည်ပါဘူး ဒါမယ့် နိုကြီးတေက ကြီးတယ်ဗျ သူဝတ်တဲ့ အင်္ကျီလည်ဟိုက်တေ ကြားထဲက မြင်နေကျနို့ကို ခုလိုဘရာလေးနဲ့ မြင်လိုက်ရတော့ လီးကတောင်လာပါတယ် အမက မှန်ရှေ့မှာရပ်ပီး သူ့နို့တေကို ကိုင်ကြည့်နေသေးတယ် ပီးတော့ လုံချည်လေးဝတ်ပီး အောက်ခံဘောင်းဘီရော ဘရာလေးပါ ချွတ်လိုက်ပါတယ် ပီးတော့ အခန်းပြင် ထွက်လာတာနဲ့ ကျွန်တော်လည်း ဧည့်ခန်းထဲကပဲ ထိုင်စောင့်နေလိုက် ပါတယ် “ဟယ် ငါ့မောင် ဘယ်တုန်းက ရောက်နေတာလဲ”
“ခုပဲရောက်တာ အစ်မ ခွေတေ အမငှါးသွားတယ်လို့ ပြောလို့ လာခဲ့တာ” “ဪ ဟုတ်လား အဲ့မှာရှိတယ်လေ နင်ဇာတ်ကားတေ ကလည်းဟယ် ဘာတေမှန်းလည်း မသိပါဘူး” ပြောပီးအစ်မက သူငှါးသွားတဲ့ ခွေတေကုန်ပီး ရွေးပေးနေလေရဲ့။ ခုဏက အရှိန်မသေ သေးတဲ့လီးက ခုလိုရှေ့က ဖင်ကြီးကုန်းနေတာ မြင်ရတော့ ပြန်တောင်လာတယ် ကျွန်တော်က နွေရာသီဆိုတော့ အောက်ခံဝတ်လေ့ မရှိဘူးဗျ ပီးတော့အောက်က ကွာတာဘောင်ဘီ အတိုနဲ့ဆို့တော့ လီကြီးက အပေါ်ကို ထောင်ထွက် နေတာပေါ့ အခွေတေ ရှာနေတာ တွေ့ပီထင်ပါရဲ့ဒီဖက်လှည့်ပီး သူငှါးသွားတဲ့ အခွေတေကို ကြည့်လိုက်တော့ မနေ့ကမှ ကျောင်းကငှါးလာတဲ့ ကိုရီးယားဟတ်ကား တစ်ကားနဲ့ တခြားနိုင်ငံခြားကားတေ ဖစ်နေတယ် Hollywood ကားတေ ဟိုအခန်းတေပါတယ် ဘယမဖစ်ပေမယ့် ဟိုကိုရီးယားကားက ဆိုးတယ်ဗျ ဇတ်လမ်းကလည်း သားနဲ့မယာပါသမီးနဲ့ ဖစ်ကြတဲ့ကားဗျ အစ်မက ရိုးရိုးဇာတ်ကားထင်ပီး ငှါးသွယးတယ် ထင်ပါရဲ့ ဒီဖက်လှည့်လာတော့ အစ်မ ကျွန်တော့်လီးကို ကြည့်နေတယ် ဟုတ်ပါတယ် ကျွန်တော့်အောက်က မသိမသာ ဖောင်းနေပါတယ် ကျွန်တော်လည်း စချင်တာနဲ့
“မအိ မအိ”“… …”အစ်မက ငေးနေတုန်း “အစ်မဘာတေ ငေးနေတာလဲ” ကျွန်တော် မေးနေတာလည်း မဖြေဘူး ”အမှန်က ဘာမမေးရသေးဘူး အဲ့တော့ရှက်ရှက်နဲ့ အနားလာထိုင်ပီး“ ဟင်.. နင်ဘာမေးလိုက်တာလဲ ”ငါညက ဇာတ်လမ်းကြောင်း ခေါင်းထည်းရောက် လာလို့ပါဟ နင်ကလည်းပြော ဘာမေးလိုက်တာလဲ” “အဲ့ ဇာတ်လမ်းပဲ မေးမလို့ ဇာတ်လမ်းတေ ကောင်းရဲ့လားလို့” “ကောင်း ကောင်းပါတယ် ကိုရီးယားက ကြည့်လက်စကြီးဟ တစ်ဝက်ပဲ ရှိသေးတယ်” “နင်ဇတ်လမ်း ကလည်းဟယ်… ဘာတေမှန်းလဲ မသိပါဘူး”“ဟဲ ရပီမအိ ရေချိုးမလို့မလား ချိုးလေ ကျွန်တော်လည်း ပြန်တော့မယ်” “အိမ်တန်းပြန်နော်” “ဟုတ်အစ်မ..” “ဟဲ့နေအုံး နင်ဘာလုပ်စရာ ရှိသေးလဲ” “မရှိဘူး အစ်မအိမ်မှာပဲ ဒီခွေတေ သွားကြည့်မလို့” ခွေတေမြှောက်ပြရင်း ပြောလိုက်သည်။ “ဘာလို့လဲမအိ” “နင်အားရင်လည်း အိမ်စောင့် ပေးပါအုံးဟယ် နင့်ခွေတေ ကြည့်ချင်ရင်လည်း ငါ့ laptop နဲ့ကြည့် အိမ်စောင့်ပေးအုံး” “ဟုတ် အစ်မ မြန်မြန်တော့ လုပ်ခဲ့နော်..” “အေးပါဟယ်”ပြောပီး ဖင်ကြီး လိမ့်လိမ့်နဲ့ ထွက်သွားရဲ့ ကျွန်တော်လည်း ဇာတ်လမ်းကြည့်ဖို့ laptop အခန်းထဲ သွားယူတော့
အစ်မက ခုဏချွတ်ထားတဲ့ အောက်ခံ ဘောင်ဘီးလေးက ကုတင်အောက်နားမှာဗျ ကျွန်တော်လည်း ကောက်ပီးတော့ ခုဏက လုံချည်ရင်ရှားနဲ့ ပုံပီးကြီးမြင်ပီး ကိုယ့်အစ်မကို မှန်းပီးဂွင်းထု နေမိတယ် ကျွန်တော်လည်း တစ်ယောက်တည်းပဲဆိုပီး ထုနေလိုက်တာ အစ်မဝင်လာတာကို မသိလိုက်ဘူး “ဟဲ့ ဟိုကောင်လေး ဘာလုပ်နေတာလဲ” “ဗျာ..” “ဘာ…ဘာမလုပ်ပါဘူး” ကမန်းကတန်းစောင်နဲ့ ဆွဲဖုန်းလိုက်ရတယ် “ဟွန်း မသိတာကျလို့ ကိုယ်အစ်မကို အတတ်ကောင်းတေ တတ်နေတယ်” ပြောပီး အစ်မက စောင်ကိုဆွဲလှန်လိုက်တယ်လီးကြီးက တောင်နေတုန်း စောင်အောက်က laptop ကိုဆွဲယူပီး “ငါ password ဖွင့်ပေးမလို့” “အိမ်ခဏစောင့်ခိုင်းတာ မဟုတ်တာတေ လုပ်မနေနဲ့” ကျွန်တော့်လီးကြီးကို တစ်ချက်ကြည့်ပီး ထွက်သွားတယ်.. ခုဏက ထုလက်စလေးတောင် ပျောက်သွားတယ် ဘယ်ရောက်သွားမှန်း မသိဘူး ကျွန်တော်လည်း laptopကို လျှောက်မွှေကြည့်တော့ အမယ် အမကလည်း အောကားတေရှိပါလား နှစ်ကားသုံးကားကြည့်ပီး လီးပြန်တောင်လာတာနဲ့ အစ်မကိုမှန်းပီး ထုလိုက်တာ လရေတေက ကြမ်းပေါ်အဖွေးသား ကျသွားတယ်
တွေ့ရာဘောင်းဘီးနဲ့ပဲ လရေတေကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်လိုက်တယ် ပီးတော့ အသာလေးဆခါက်ပီး အဝတ်ပုံပေါ် ဟန်မပျက် ပြန်တင်ထားလိုက်ပီးကိုရီးယားဟတ်ကားလေးကိုဖွင့် laptopကိုဗိုက်ပေါ်တင် ပက်လက်အနေအထားနဲ့ကြည့်နေလိုက်တာအစ်မကရေချိုးပီး ဝင်လာတာတောင်သတိမထားလိုက်မိဘူး“ငါ့မောင်ကလည်း အတော်ကိုဖစ်နေတာနော်” သူဟာကြီးဖောင်းနေတာမြင်ပီး ပြောလိုက်မိတဲ့ကျွန်မ “ဟာ.. အစ်မကလည်း အသံလေးဘာလေး မပေးဘူးဗျား..” “အသံပေးတေ ဘာတေလုပ်မနေနဲ့ သွား!အပြင်ကစောင့် ငါအင်္ကျီလည်းပီးမှ ထွက်လာမယ်”“ဟုတ် အစ်မ”သူထွက်သွားတာနဲ့အထွင်းခံဝတ်တော့ အတွင်းခံက စိုတိုတိုနဲ့ ခုဏက ခေါင်းလျှော်လာတဲ့ ရေတေကျမှပါလို့ပဲ တွေးပီး ဝတ်ထားလိုက်တယ်ဘရာနဲ့ အောက်ခံဘောင်ဘီကို ပန်းရောင်ဝမ်းဆက်လေးဝတ်ပီး အပေါ်က T-shirtလေးထပ်ဝတ် ပီးတော့ အောက်က ပေါင်လယ်လောက်ဘောင်းဘီတိုလေးပဲဝတ်လိုက်တယ်ပူလို့ဘရာအသေးလေး ရွေးဝတ်လိုက်မိတာက ကြီးမားတဲ့ ကျွန်မရဲ့ နို့တေကိုမထိန်းနိုင်ပဲ မို့မို့မောက်မောက်နဲ့ဖစ်ပီး နိမ့်မြင့်လှုပ်ရှားနေတယ်
မှန်ထဲတစ်ပါတ် လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ ကြီးမာတဲ့ ဖင် ရင်တေက နေရာတကျမို့ဖောင်းလျက်ရှိပီး လမ်းလျှောက်ရင်ကို နိမ့်မြင့်လှုပ်ရှား လျက်ရှိသည်။ မြို့ထဲ ခဏလမ်းလျောက်လျှင် ယောက်ျားသားများ၏ ဝိုင်းကြည့်ခြင်းကို ခံရတတ်ပီး ဒါကိုပင်စိတ်ထဲမှာ ကျေနပ်နေခဲ့သည့်မို့ လ့ကျင့်ခန်းတေလည်း မှန်မှန်လုပ်ခဲ့တော့ ဖင်ရင်တေက တင်းရင်းပီး ကြီးပေမယ့် လျော့တွဲတာမျိုးမရှိ။ မိန်းကလေးသူငယ်ချင်းအချင်းချင်းက ပြန်ငေးရသည်ထိဖစ်ခဲ့သည်။ဒါကို သူတိူ့ကခေါ်တာက “အကိတ်”တဲ့ နာမည်က ချစ်ရာလေးသွေးသားတွေ ပြောင်းလဲလာတဲ့ အရွယ်မို့ လိင်ကိစ္စများကို စ်တ်ဝင်စားနေတတ်ပီး တစ်ခါတစ်လေမှာ လက်နဲ့နှိုက်ပီး အာသာဖြေတဲ့အခါမျိုးကျ မျက်တောင်တေကို ကော့စင်းပီး ကောင်းလိုက်သည့်ဖစ်ခြင်း….အလိုမခံရသေးတဲ့ စောက်ဖုတ်အပျိုစင်လေးပေမယ့် ကိုယ့်လက်နဲ့ကိုလုပ်တာများလို့ နည်းနည်းဟလေးဖစ်နေသည်။ အခုလည်း သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ အောကားတေကြည့်ပီး feelတက်နေတူန်း လက်နဲ့လုပ်မလို့အလုပ်မှာ မောင်လေးရောက်လာလို့ ကပြာကယာ အင်္ကျီကောက်ဝတ်ပီး ရေချိုးမည်ဟုပြောကာ ထွက်ခဲ့ရသည်။
ဒါတောင် ဘယ်တည်းကချောင်းနေတာလည်း မသိတဲ့ မောင်ရဲ့ လီးကလည်းခပ်မတ်မတ်နဲ့ အကြည့်ကိုမနည်းထိန်းရင်း ရေချိုးခန်းထဲပြေးပီး လုပ်လိုက်ရတာ ခဏနဲ့တင် ပီးသွားသည်။ ရေသေချာဆေးပီး ပြန်လာခဲ့လိုက်တယ်။ ရေချိုးတူန်းက လုပ်ထားတာတောင် စောက်ဖုတ်က ယွစိယွစိဖစ်နေတုန်း ဘောင်းကစိုနေလို့ဖစ်မှာဟုတွေးရင်း အင်္ကျီဝတ်ပီးတော့ သနပ်ခါးလေး လိမ်းပီး ဆံပင်တေ dryerနဲ့မှုတ်က ခပ်လျော့လျော့လေး စည်းပီး အပြင်ထွက်ခဲ့သည်။“ငါမောင် ပျင်းနေပီလား” “ဪ ရပါတယ် မပျင်းပါဘူး”“အေ ငါခဏ ထမင်းအိုးတည်လိုက်အုံးမယ် ပီးမှ နင့်အခွေတေတူတူကြည့်မယ်လေ ခဏစောင့်အုံး” အာပါးပါး အစ်မက တကယ်ကိတ်တာပဲဝတ်ထားတဲ့ ဘောင်းဘီတိုလေးအောက်က ပေါင်တံဖြုဖြူလေးတော့ စွင့်ကားတဲ့တင် သေးကျဉ်တဲ့ခါးလေးဖောင်းမို့တေတဲ့ ရင်သာတေ ကျော့ရှင်းတဲ့ လည်တိုင်လေးဒီနို့တေကိုကိုင်ဆွဲ အဲ့အိုးကြီးကို နောက်ကနေ စောင့်လို့းလိုက်ရလျှင်တော့ဖြင့်ထမင်းအိုးတည်ပီး ပြန်လာတော့ လက်ထဲမှာနေ့ကြာစေ့ထုပ်ကိုင်ပီး ကျွန်တော့ဘေးမှာဝင်လိုက်လိုက်တယ်“ရော့ စားလေ”“အင်း….”
လက်ကိုအပေါ်မြှောက်ပီး ဆံပင်လေးတေ ဖီးနေလိုက်တော့ နို့တေက အပေါ်ကို ပိုပီးကြွတယ်လာတယ်ကြည့်ရတာ ဒ်ိနေ့မှကို နို့တေက ပိုကြီးနေသလိုပဲနေ့ကြာစေ့ ခွာစားနေတဲ့နှုတ်ခမ်းဖူးလေးတေကလည်း ဆွဲနမ်းချင်စရာ ကောင်းနေတယ် အဲ့လိုနဲ့ပဲဘေးက အမကလည်း TVကြည့်နေရင်းနဲ့ ခေါင်းဖီးနေတော့ နို့တေကနှိမ့်မြင်ဖစ်နေတယ်ကြည့်နေတဲ့ သရဲကားကိုတောင် စိတ်မဝင်စား နိုင်တော့ဘူး နို့တေကြည့်လို့ ကောင်းနေတုန်း ရှိသေးတယ် အစ်မက သရဲကားကြည့်ရင်း လန့်ပီး ကျွန်တော့ရင်ခွင်ထဲ ရောက်လာတယ် နို့တေက ရင်ဘတ်မှာ လာကပ်နေတယ်အသက်ရှုသံတိုးတိုးလေးနဲ့ ကိုယ်နံလေးကသင်းနေတယ်ထိုအချိန်မှာပဲ ကံကောင်ချင်တော့ မီးကပျက်သွားလေသည်။ဒီတစ်ခါတော့ EPCကို ကျေးဇူးတင်မိသည်။ခုဏက နို့တကြည့်ပီး ထနေတဲ့ စိတ်က လီးတောင်လာတော့သည်။ တောင်နေတဲ့ လီးက အစ်မဗိုက်ကို ထောက်မိလေသည်။ကျွန်တော်လည်း ဖက်ထားရင်းကကျောပြင်လေးကို ပွတ်ပေးရင်း အောက်တဖြည်းဖြည်းဆင်းပိ်း ဖင်လေးကိုပွတ်နေမိတယ် “နင့်…နင့် ဟိုဟာ ထောက် ထောက်နေတယ်”“ဗျာ…..”“ထောက် ထောက်နေတယ်လို့”
ရင်ခွင်ထဲကနေ ခေါင်းလေးမော့ပီး ပြောနေတဲ့ အစ်မကို ကြည့်ပီး စိတ်တေမထိန်းနိုင်တော့ဘဲ ဆွဲနမ်းလိုက်တယ်“အင်း အင်း အွန်း……နင်လာလုပ်တာလဲ ငါနင့်အစ်မလေ…”ဘာမှပြန်မပြောမိဘဲ ဆက်ပီးနမ်းနေမိတယ် လက်နှစ်ဖက်ကလည်း နိူ့တေကို အတင်းပွတ်နေတယ်သူ့ကို ဆက်မဖက်ထားတော့တဲ့ ကျန်တော့ကို တွန်းဖယ်ပီး“ဖယ်စမ်း နင်ဒါဘာလုပ်တာလဲ ဟန်????”“ကျွန် ကျွန်တော်စိတ်တေလွတ်သွားတယ်တောင်းပန်းပါတယ် အစ်မရယ်” “လူကြီးတေနဲ့ တိုင်ချင်လည်းတိုင်ပါတော့” ခေါင်းကို တွင်တွင်ငုံ့ပ်ိး ပြောနေမိတယ်နှစ်ယောက်သား အမှောင်ခန်းလေးထဲမှာ တိတ်ဆိတ်စွာ….အတော်ကြာတော့မှကျွန်တော့်နားရွက်လေးကို ဖွဖွလေးနမ်းရင“အစ်မ မင့်ကိုစိတ်မဆိုးဘူးနော်”နားနားကို တိုးတိုးလေး ကပ်ပြောပီးကျွန်တော့လက်တစ်ဖက်ကို ယူကာ သူနို့ပေါ်တင်ပေးလိုက်တယ်နို့တေကို အသာပွတ်နေမိတဲ့ထိ စိတ်ကကြောက်နေတုန်း“ကိုင်လို့ကောင်းရဲ့လား ငါ့မောင်ရဲ့ ”“ကောင်း ကောင်းပါတယ်”“ကောင်းရင်လည်း နောက်တစ်ဖက်လုပ်အုံးလေကွာ”ပြောပီး အပေါ်ကနေမိုး နှုတ်ခမ်းတေကို တေ့စုပ်ပစ်တော့စိတ်တေပြန်ကြွလာတယ်
လီးပြန်တောင်လာပီး နို့တေကိုပွတ်ချေနေရင်း လျှာကို သူ့ပါစပ်ထဲထိုးထည့်လိုက့တော့ သူကပြန်လျှာနဲ့ပြန်ကိလိပေးတယ်“အစ်မ အပေါ်က အင်္ကျီကြီးချွတ်ဗျာ”“ဟင်း ချွတ်လေ မင်းပဲချွတ်ပေးတော့”အင်္ကျီဖြူဖြူဖွေးဖွေးနို့တေက ဘရာသေးသေးထဲက အတင်ရုန်းထွက်နေကြတယ်ေ ဘ်ာလီပါဆက်တိုက်ချွတ်ပီးဟင်းရည်သောက်ပန်ကန်လောက်ရှိတဲ့ နို့တေ ကို အငမ်းမရ ပစ်စို့ပီး လက်ကလည်း ကျန်တဲ့နို့တစ်လုံးကို အတင်းပွတ်ချေပေးတော့“အား ကောင်းတယ် ငါ့မောင့်ရယ်…. အား…”နှစ်ယောက်သား အမှောင်လေးထဲမှာ စခန်းသွားနေကြသည်။အစ်မရဲ့တအင်းအင်းညည်းသံလေးတေက နို့တေကလည်း စို့ရင်းနဲ့ကို ပိုကြီးလာသယောင်“မင့်ကလည်း အောက်ကဘောင်ဘီးကြီးချွတ်ပါအုံး”ပါစပ်တေကို နို့တေက မခွာနိုင်တာနဲ့“အင်း အင်း”သူကိုယ်တိုင်ဘောင်းဘီကို ချွတ်ပေးပီးလီးကြီး ဂွင်းတိုက်ပေးနေတယ် ကျွန်တော်လည်း အားကျမခံ သူကို ပြန်ချွတ် စောက်ဖုတ်ကို လက်နဲ့ပွတ်ပေးလိုက်တယ်လက်ညှိုးကိုထည့်ပီး အထုတ်အသွင်းလေးလုပ်ပေးနေပီး နည်းနည်းအရည်တေလိုက်လာတော့ လက်ခလယ်ပါသွင်းပီး ခပ်မြန်မြန်လေးလုပ်ပေးလိုက်တယ်
“နင်စောက်ဖုတ်နှိုက်တာ ကောင်းလိုက်တာဟာ နို့တေလည်း သေချာစုပ်ပေးပါအုံး”ကျွန်ဘာလို့ဒီလောက်ထိရဲတင်ပီး ဒီလိုတေပြောထွက်နေလည်းတော့ မသိဘူး ဒါပေမယ့် ဒီလို့ပြောရတာကိုက စိတ်တေပိုကြွလာစေတယ် “အမ ဂွင်းတိုက်ပေးတာကလည်း ကောင်းတာပဲဗျ ကိုယ်တိုင်လုပ်ရတာနဲ့တခြားစီးပဲ”ပီးတော့ နို့တေ ဟော့ဒီနို့ကြီးတေ လက်ကိုမလွတ်ချင်တော့ဘူး”နှစ်ယောက်လုံးတော်တော်ထန်နေပါပီ“တော်ပီ စောက်ဖုတ်ကို ဆက်မနှိုက်နဲ့တော့.. ပီးသွားလိမ့်မယ်”“ကျွန်တော်တို့လိုးရအောင်”“အေး ဒီရှေ့ကိုလာခဲ့”သူ့လီးကြီးကို ကိုင်ပီး စောက်ပတ်ရှေ့ရောက်အောင် ဆွဲခေါ်လိုက်တယ်ဆိုဖာခုံမှာ မှီရင်း ပေါင်နှစ်ချောင်းကို ဖြဲပေးလိုက်တယ်ပါကင်ဖွင့်မှာမို့ နာမှာမှန်းသိတာနဲ့“ငါ့မောင့် တစ်ချုက်ပဲ အားနဲ့စောင့်သွင်းလိုက်နော်”နားမှာမှန်းသိပေမယ့် ဖြေးဖြေးချင်းသွင်းနေတာနဲ့စာရင်တော့ ပိုသက်သာမှာပါပီးတော့ ခုဏ ကိုင်ကြည့်ရသလောက် မောင့်လေးရဲ့လီးကြီးကလည်း မသေးလှပါ..“လို့တော့ ထည့်ထည့်လိုလတော့”“နေအုံး ငါ့နှုတ်ခမ်းတေကို နမ်းပါအုံး ”ပါကင်ဖွင်ရင် နာလွန်းပီး အော်မိမှာမို့ ပါစပ်တေကို နမ်းခိုင်းလိုက်သည်။
ပါစပ်ကသူ့ကိုနမ်းရင်း အောက်ကလီးကို စောက်ပတ်ကို ချိန်နေသည်။ သိပ်တော့မလွယ်အစ်မကပဲကိုင်ပီး တေ့ပေးလိုက်သည်။သူပြောတဲ့တိုင်း တစ်ချက်တည်းနဲ့ စောင့်သွင်းပေးလိုက်သည်။ အရည်တေနဲ့မို့သိပ်အခက်အခဲမရှိပေမယ့် အပျိုအမှေးလေးကို ထိုးခွဲသွားကို လီးကရော ပါးစပ်ကပါ သိလိုက်သည်။ဖြေးချင်းချင်းပဲ ညှောင့်နေရင်းကိုယ်အမကို ပါကင်ဖွင့်ရသည့်အတွေးက ပိူပီး ဖီးတက်စေသည်။“မမ နာလားဟင်”“အင်း ရတယ် ရတယ် ခုလို့လေး ဖြေးဖြေးလေးပဲ လုပ်နေနော်”ဖြေးဖြေးလေးပဲ ဆောင့်ပေးရင်း နို့တေကိုအသာပွတ်နေမိတယ်နှုတ်ခမ်းတေကို စုပ်နမ်းနေတာကြောင့် ဆောင်ချက်ချက်တိုင်းမှာနှုတ်ခမ်းလေးဟဟသွားတာကို ခံစာနေရသည်။ “ကောင်းလိုက်တာအစ်မရယ်အစ်မစောက်ပတ်ကို လိုးလို့ကောင်းတယ် အင်း….”“ဒါဖြင့်ရင် င့ကိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးပါအုံးခပ်ပြင်းပြင်းဆောင့်ပါအုံးကွာ”“ခံနိုင်ပီလား..”“အင်း ဆောင့်ငါ့မောင့်ဆောင့်ဒီစောက်ဖုတ်ကြီးက ယွနေ….အား အား အ အအား…..”စကားတောင် မဆုံးလိုက် ရဘူး တရစပ်ဆောင့်ပေးတော့သည်။ဖတ်ဖတ် ဖတ် ဖွတ် ဘွတ်ပတ် အား အင်း ပတ်ပတ် အား
“လိုး လိုး မညှာနဲ့ ”“လိုးမှာ ဟောဒီစောက်ပတ်ကြီးက ဆာလို့ကတော့ အသားကုန်ကို ပစ်ဆောင့်ပီးလိုးမှာ”မှောင်ကလည်း မှောင်နေတော့ ဘာကိုမှမရှက်ကြောက့်မိပဲ စွတ်ပြောနေမ်သည်။“အား အင်း ကောင်းတယ်မောင်လေးဆောင့်”ကိုယ်မောင်က ကိုယ့်ကို ပြန်လိုးနေတယ်ဆိုတာက ပိုပီး စိတ်ကြွစေသည်။ သူလည်း ဒီလိုပဲဖစ်မှာပါ“အား.. ကျွတ် ကောင်းတယ်ဗျာလို့လို့သိပ်ကောင်းတယ်”“ကောင်းရင်လည်း စိတ်ကြိုက်သာစော်ကွာ”“အား..အင့် အင့်…ကျွတ်”တော်တော်ကြာကြာ ဆော့င်ပီးတော့ လီကိုဆတ်ခနဲ့ဆွဲထုတ်ပီး“အစ်မ ဒီဖက်ကို လာခဲ့ဗျာ..”ခုံရဲ့အစွန်ဖက်ကို သွားပီး“လေးဖက်ထောက်လိုက်လေ”ပြောသလိုလိုပဲမြန်မြန်ကုန်းပေးလိုက်တော့ နောက်က စောက်ဖူတ်က ပေါင်ကြားထဲနေ ပြူးထွက်လာသည်ပြုထွက်လာတဲ့စောက်ဖုတ်ကြီး ဒစ်နဲ့ပွတ်ွဲပီး စောက်ခေါင်းထဲကို လီးကို ဆောင့်သွင်းလိုက်သည်။“အား… သေပါပီ”မထင်မှတ်ပဲဝင်လာလို့ လန့်ပီး အောက်လိုက်မိသည်။“နာသွားလားမမ”“နာတာပေါ့ မင့်က မပြောမဆိုနဲ့လုပ်တာကို” “အာ့ဆိုလည်း ပြောပီး ဆောင့်မယ့်ဗျာ”“ဆောင့် ပီ”၊ “ဆောင့်” “ဆောင့်”
နှစ်ယောက်သား အတိုင်အဖောက်တေညီပီး ကိုယ်ကဆောင့် သူကကော့ပေးနဲ့တော်တော်ကောင်းနေကြသည်။ဒါပေမယ့် နှစ်ယောက်လုံးက တစ်ခါပီးပီးသားတေမို့ တော်တော်နဲ့မပီးနိုင်ဖစ်နေသည်။သူကလည်းရေချိုးရင်လုပ်ထားသလို ကျွန်တော်ကလည်း သူရေချိုးတုန်း ထုထားသေးတယ်။“ခဏရပ်အုံး မောင်လေး မမကုတင်ပေါ်သွားမယ်”“ဒီပုံစံကြီးက အစ်မလည်းညောင်းပီး မင်းလည်းညောင်းပီးမလား”“ဟုတ် အစ်မ”အခန်းထဲကို ကျွန်မကပဲ ဦးဆောင် ဝင်သွားလိုက်သည်။ ထိုစဉ်မှာပဲ မီးက လင်းလာသည်။တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ရှက်သွားကြပေမယ့်အောက်က စောင်ပတ်ကပိုယွနေသည်မို့“သွားလေး ကုတင်ပေါ်ပက်လက်လှန်လိုက်”အပေါ်က တက်ခွပီး လီးကို ကိုင် စောက်ဖူတ်ဝမှာ တေ့ပီး မျက်စိစုတ်မိုတ် ထိုင်ချလိုက်သည်။ ပီးမှဖြေးဖြေးချင်းပြန်ကြွ ထိုင်ထလုပ်ပေးနေလိုက်တယ်မျက်စိဖွင်ကြည့်လိုက်တော့ကျွန်မကို ပြုံပြုံလေးကြည့်နေပီး လက်ကတော့ ထိုင်ထလုပ်နေတဲ့ ဖင်တေကို ပယ်ပယ်နယ်နယ် ပွတ်နေတယ် “ဘာတေဒီလောက် စိုက်ကြည့် နေတာလဲ” “ကိုယ့်အစ်မကို ခုမှမြင်ဖူးတာလား”“ခုလို လုပ်နေတာတော့ ခုမှမြင်ဖူးတာပဲ”
ပြောလိုက်တော့ ရှက်ပီး ခေါင်းကို ငုံသွားတယ်ဖင်ကတော့ ဆောင့်နေတုန်း“ တကယ်ပြောတာ အစ်မရဲ့ နို့တေက တကယ်ကြည့်လို့ကောင်း တယ်ကိုင်လို့လည်းကောင်းတယ် ဟီး..”ပြောရင်း နို့တေကို ပြန်ကိုင်နေလိုက်တယ်အစ်မက ဒီဖက်လှည့်လာပီး ပြုံပီး ဆက်ဆောင့်နေတယ်ဆံဆလေးတေက နဖူးပေါက် ကျနေတာတယ်။Aircon ဖွင့်ထားပေမယ့် ချက်ချင်းမအေးသေးတော့ နူးဖူးမှာ ချေးသီးလေးတေ စို့နေတယ်ကျွန်တော်ကချွေးလေးတေကို အောက်နေသုတ်ပေးရင်း သူအဆောင့်ကို ပြန်ကော့သွင်းနေတယ်။“အစ်မလုပ်ပေးတာ ကောင်းရဲ့လား”“အင်း ကောင်းတယ်အမ”“နင် ဒီည ဒီမှာပဲ အိပ်လိုက်တော့”“နင့် ဦးလေးက ဒီညပြန်မအိပ်ဘူး နယ်ခရီးထွက်ရမယ်တဲ့” “ဟာ တကယ်….”“အင်း…”“ကောင်းလိုက်တာအစ်မရယ် ”“ဘာကိုကောင်းတာလဲ..ပြန်မအိပ်တာလား ခုလိုးနေတာကိုလား”“နှစ်ခုလုံးပဲအစ်မ”“အမလေး လူကို တစ်ညလုံးလိူးတော့မှာမှာလားမသိဘူး”“ဟီး ဟုတ်ပါဘူး, အစ်မရဲ့”“အောင်မာ ငါကလည်း ဒီကလည်း တစ်ညလုံး အလိုးမခံပါဘူးနော်”နှစ်ယောက်သား သဘောကျစွာ ရယ်မောမိကြသည်။
ပထဆုံးအကြိမ်မှာပင် ခုလို့အကြာကြီး လုပ်ဖစ်သွားခြင်းကို လိင်ဆက်ဆံရေးကို ပို့ပွင့်လင်းသွားစေသည်။“ကဲ မောင်လေး ဒီတစ်ခါပီးလိုက်တော့နော်…”“ပီးရင် ရေချိုး ပီးမှ ထမင်းစားရမယ် ဟုတ်ပီလား”“ပီးရင်တော့ ကျွန်တော်က ဟော့ဒီစောက်ပတ်လေးကို ထပ်လိုးမှာပေါ့”စောက်ပတ်ကို အပေါ်က နေပွတ်ပေးပီး ပြောလိုက်တယ်အမက ဘာမှမပြောတော့ပဲ ဆကိဆောငိ့ပေးနေတယ်ခါယမ်းနေတဲ့ နိူ့တေကို လက်နဲ့ထိန်းပေးရင်း “မမ ရှေ့နဲ့နဲကုန်ပေးပါအုံး”“နိူ့တေကို စုပ်ချင်သေးတယ်ဗျ”“ကလေးက နို့ဆာတားလား တိုက်မှာပေါ့” ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ နို့တေကို ပါစပ်ရှေ့ ဝဲချပေးလာနဲ့ အငမ်းမရကို ဖက်ထားရင်း စို့ပေးလိုက်တယ်
ဆောင့်တာ နားထားတဲ့ အဖုတ်က ပွစိပွစိဖစ်ပီး လီး လာညှစ်နေတာနဲ့ အောက်ကနေကော့ပီးဆောင်လလိုးလိုက်တယ်“အား ကောင်းတယ်မောင်းလေးဆောင့် အားရပါးရသာလို့း..”“အစ်မကို လိုးရတာ တကယ်ကောင်းတယ်ဗျာ”ပတ် ပတ် အား အင်းဖတ်ဖတ် ကျွတ် အား ရှီး“မောင်လေး အစ်မပီးတော့မယ်”“ခပ်သွက်သွက်လေးလိုးလိုက်တော့”“ကျွန်တော်လည်း ပီးတော့မယ် အမ၊ တူတူပီးမယ်”အား အား အား အင်း အ အ အအောက်ကနေ အသားကုန်ဆောင့်လိုက်တာနှစ်ယောက်သား ကာမပန်းတိုင် ရောက်ဂှိသွားကြလေတော့သည်။